မန္တလေးမှာ မင်းမူလာနေတဲ့ စက်မှုဇုံနံပါတ်တပ်ကားများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » မန္တလေးမှာ မင်းမူလာနေတဲ့ စက်မှုဇုံနံပါတ်တပ်ကားများ
မန္တလေးမှာ မင်းမူလာနေတဲ့ စက်မှုဇုံနံပါတ်တပ်ကားများ
Posted by piti on Jan 8, 2011 in News | 8 comments
၂၀၁၀-၂၀၁၁ နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားများဝင်ရောက်မှုဟာ အတော်လေးများလာတာကို တွေ့မြင်နေရပါတယ်။ ဒါဟာ ကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါ။ နိုင်ငံခြားသားတွေဝင်ရောက်မှုကြောင့် ပြည်တွင်းကသူတွေအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရေးတွေ အတော်အသင့်အဆင်ပြေခဲ့တာပေါ့။
မန္တလေးမြို့မှာလည်း နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားတွေဝင်ရောက်မှုဟာ များပြားလာခဲ့ပါတယ်။ ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းက မော်တော်ကားတွေဟာ တစ်လလုံးနီးပါး အလုပ်လုပ်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကက/….. အပါအ၀င် အငှားယဉ်များ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ နံပါတ်အပြာကားများ အပြင် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ နံပါတ်အနက်တွေပါ ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းမှာ အဆင်ပြေနေကြပါတယ်။ ထူးခြားတာကတော့ စက်မှုဇုံထုပ်လို့ နံမည်ခံထားတဲ့ လိုင်စင်မဲ့ကားတွေကို အသွင်ပြောင်းထားတဲ့ကားတွေ တိုးလုပ်ငန်းထဲ အလုံးအရင်းနဲ့ ၀င်ရောက်လာတာပါ။ ကညနမှာ တရားဝင်နံပါတ်ရပြီး ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်နေရင်တော့ မထူးဆန်းဘူးပြောရမှာပေါ့။ အခုတော့ ဘာနံပါတ်မှမကျသေးဘဲ၊ အင်ဂျင်နံပါတ်ထဲရေးထားတဲ့ လိုင်စင်မဲ့ကားတွေ အလုံးအရင်းနဲ့ ၀င်ရောက်ပြေးဆွဲလာနေတာပါ။
ဒီလိုင်စင်မရှိသေးတဲ့ စက်မှုဇုံနံပါတ်တပ်ကားများဟာ မော်ဒယ်မြင့်ကားတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းကျတော့ အတော်ချိုပါတယ်။ တရားဝင်ဝယ်ယူထားတဲ့ ကားတွေရဲ့ဈေး တစ်ဝက်ခန့်သာရှိပါတယ်။ ယင်းကားများဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက် Tour Company တွေဟာ မော်ဒယ်မြင့်တဲ့ စက်မှုဇုံနံမည်ခံကားတွေကို ပိုသုံးလာကြပါတယ်။ အခွန်အခ တရားဝင်ပေးသွင်းထားတဲ့ မော်ဒယ်နိမ့် ကက/…. အငှားယဉ်တွေကို မရှိသုံး သုံးလာကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီအတွက် ယခင်လုပ်ကိုင်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေ စိတ်ညစ်နေကြရပါတယ်။ ဧည့်သည်အ၀င်များတဲ့အချိန်မှာ လုပ်ငန်းမသိသာပေမယ့် ဧည့်သည်ပါးသွားတဲ့အချိန်မှာ အလုပ်မရှိတော့မှာ တွေးပူနေကြရပါတယ်။ အခုတောင် စက်မှုဇုံကားတွေက Tour Company တွေက ဦးစားပေးခရီးစဉ်ချပေးပြီး ပိုလျှံမှသာ ရတော့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
“ကျွန်တော်တို့ဟာ နှစ်စဉ်အစိုးရကို ပြေးဆွဲခွန်၊ ကုန်သွယ်ခွန်တွေ အမြောက်အများဆောင်နေတဲ့ ကားပိုင်ရှင်တွေပါ။ စက်မှုဇုံနံပါတ်တပ်ကားတွေ လိမ့်ဝင်လာတော့ ကျွန်တော်တို့လို တရားဝင်အခွန်အခတွေ ပေးဆောင်နေရတဲ့ကားတွေအတွက် အများကြီးနစ်နာပါတယ်” လို့ ကက/….. ပိုင်ရှင်တစ်ယောက်က ညည်းတွားပြောဆိုနေသံကို စိတ်မကောင်းစွာကြားခဲ့ပါတယ်။ စက်မှုဇုံနံမည်ခံကားတွေနဲ့ပါတ်သက်ပြီး အစိုးရက စိစစ်ပေးသင့်နေပါပြီလို့လည်း ကားပိုင်ရှင်အများစုက ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
ကားဝယ်နိုင်တော့လည်း အခွန်ခက တစ်မှောင်………….. မနောတို့လို ၂၀၀ ပေးစီး ကြပ်ကြပ်သပ်သပ်လည်း စီး ဘယ်လိုစီးစီး ဒီလိုမျိုးလေးကတောင် အေးချမ်းနေသလိုပါပဲ (မရှိတာကို နှစ်သိမ့်မိတာပါ)
ဥပဒေကအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီး သူတို့လောက်ဖမ်းတဲ့လိုင်စင်မဲ့ကား, ပေါများလိုက်တဲ့လိုင်စင်မဲ့ကား,အဲဒီတော့တရားဝင်လိုင်စင်ကားပိုင်ရှင်တွေကသောက်ရူးတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့…စည်းစံနစ် မကျတဲ့ဒီနိင်ငံမှာလူလာဖြစ်မှတော့ မိုးခါးရေ သာလိုက်သောက်ရမလိုဖြစ်နေပြီ
ခါးလိုက်တာ .. ဆရာကြီး သောက်မယ် ဆိုလို့ လိုက်သောက်ကြည့်တာ .. (အဲဒီကားတွေ ဆီကို မှောင်ခိုက ၀ယ်ထည့်ရမှာ ဆိုတော့ .. လောင်စာဆီဈေး တက်ဦးမှာ မြင်ယောင်သေး)
KZH-100,HIACE အမျိုးအစားတွေ 2011နှစ်အစမှာ ဂျပန်မှာဈေးတွေနှစ်ဆတက်သွားတယ် လက်ရှိဝယ်ထားတဲ.သူတွေအများကြီးမြတ်သွားပြီ…………
လိုင်စင်မဲ့ကားတွေကို သိသိကြီးနဲ့ ပေးစီးနေတာ သူတို့သိမ်းပြီး မကြာခင်ကတည်းကပါ ဒါပေမယ့် စီးခွင့်ရတဲ့သူတွေက ကြံ့ဖွတ်က လူကြီးတွေနဲ့ အထက်ပိုင်းတွေပါ တကယ်တန်းတော့ ကားအကောင်းတွေရဲ့ဈေးက မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေအနေနဲ့ တတ်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မတရားတဲ့ အခွန်အကောက်တွေကြောင့် မလိုအပ်ပဲ ဈေးတွေမတန်တဆ ကြီးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တွေသိမ်းထားတဲ့ကားတွေကိုလည်း ခပ်တည်တည်နဲ့ လေလံက ပေးလိုက်ပေးတယ် အလကားရတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို စက်ရုံဈေးနဲ့ ရောင်းစားပြီး အရှက်မရှိ လုပ်ရဲတယ် သြော် နိုင်ငံနိုင်ငံ
လုပ်လိုက်ကြပေါ့ နော့ သူ့ခေတ်ထဲနေနေရတာကိုး
ဒို့ခေတ်ရောက်ရမည်မှာမလွဲပါ…. (ဆရာကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ တစ်ချိန်က နာမယ်ကြီးဝတ္ထု စာအုပ်ပြောတာနော်)
အဲဒါလည်း ဟုတ်တာပဲ ပြည်တွင်းဖြစ်ပဲ အားပေးရမျာပေါ့